एमालेसँग एक्लै लड्न कसैले सक्दैन : ओली – Gandaki Chhadke
काठमाडौं।नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै लड्न कुनै पार्टीले पनि नसक्ने बताएका छन् । आज ललितपुरमा आयोजित युवा संघको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
ओलीले भने, ‘एमालेसँग एक्लै लड्न सकिन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ । कसैले नचिताए हुन्छ ।’ १० वटा पार्टी मिल्दा पनि जम्माजम्मी १२० जना पुग्ने ओलीले दावी गरे ।‘एक–एक दर्जन मान्छे भएका दश पार्टी मिल्दा कति हुन्छ ? १० दर्जन नै त भए होला नि होइन ?
उनले देशमा विकासको क्रान्ति गर्ने पनि बताए । उनले एमाले नेपालको राजनीतिको प्रमुख धार नै भएको पनि दाबी गरे ।उनले अबको चुनावमा प्रतिस्पर्धीहरु हुने तर प्रतिस्पर्धा नहुने भविष्यवाणी गरे । ‘चुनावमा उठेपछि प्रतिस्पर्धी हुन्छन् ।